Nagu saabsan - Shanghai Allsourcing Industrial Co., Ltd.
Qalabka Ciyaaraha iyo Madadaalada
Koofiyadaha iyo Koofiyadaha
Sibipper & bogagga
Koofiyadaha Beanie & Knitted
SHANGHAI ALLSOURCING warshadaha CO., LTD.
SHANGHAI ALLSOURCING waa ganacsade hormuud u ah dhoofinta xirfadleyda iyo soo dejiyaha wax soo saarka isboortiga iyo waxyaabaha madadaalada, iyo alaabada otomatikada warshadaha, Waxaan ka caawinnaa macaamiisheenna inay soo saaraan dhammaan qalabka moodada iyo alaabada Warshadaha ee dhammaan Shiinaha halkan.
Allsourcing wuxuu bixin karaa xariiq buuxa oo ah qalabka moodada, Awoodda gaarka ah ee Allsourcing ee naqshadeynta iyo tarjumaadda isbeddellada moodada iyo walxaha dhammaan akoonnada suuqyada iyo dhibcaha qiimaha ayaa noo oggolaanaya inaan horumarinno macaamiil kala duwan. Shirkaddu waxay leedahay in ka badan 500 oo warshadood ah oo qayb ka ah. Tani waxay naga dhigi kartaa awood aan ku siino adeeg aad u fiican macaamiisha adduunka oo idil.
Cinwaanka: Huguang East Road 89, Degmada Minhang, Shanghai, Shiinaha
Shanghai Allsourcing waa shirkad xirfadlayaal ah oo isku dubarideysa naqshadeynta, soo saarista iyo iibinta koofiyadaha iyo qalabyada kale oo ay weheliso warshaddeena oo lagu aasaasay 2006 magaalada Shanghai. Waxaan ku takhasusay dhammaan noocyada daboolka, iyo sidoo kale qaar ka mid ah qalabka dharka lagu xirto. Waxaan sidoo kale ku siin karnaa badeecooyin kale oo badan oo ku saleysan naqshadeyntaada iyo farshaxankaaga. Amarka kasta, waxaan si dhab ah u xakameynaa tayada xulashada, daabacaadda, tolida, xirxirida iyo rarka ugu dambeeya. Falsafadda: Iskaashiga ugu wanaagsan wuxuu ka tarjumayaa xiriirka kalsoonida iyo ixtiraamka faa'iidooyinka labada dhinac, taasoo horseedaysa natiijo wax ku ool ah oo laga gaaro. Dhis xiriir dheer oo lala yeesho macaamiisha; U janjeedha macaamiisha; Qiimaha tartanka; Daacadnimo iyo daacadnimo; Gaarsiinta waqtiga; Soo bandhig alaab tayo sare leh. Haddii aad raadineyso lamaane iskaashi oo aqoon leh, nala soo xiriir kaliya. Waxaan kuu balanqaadeynaa wadashaqeyn buuxda 24 saac gudahood jawaabteeda, wax soo saar tayo sare leh oo qiimo leh, iyo jadwal wax soo saar si aad ula kulanto qorshooyinkaaga suuq geynta. Wixii macluumaad dheeraad ah ee nagu saabsan, waxaan si diiran kuugu soo dhawaynaynaa inaad soo booqato degelkeenna. Waan ku farxi doonnaa inaan kaa maqalno, oo aad baan ugu faraxsanahay inaan kaa caawinno baahiyahaaga
Wadada Bariga Huguang 89, Degmada Minhang, Shanghai, Shiinaha
Waa maxay habka ugu wanaagsan ee loo xirto koofiyadda baseball
Waa maxay habka ugu wanaagsan ee loo xirto koofiyad fidsan